लहानमा पक्की घर निर्माणमा वडाध्यक्ष साहको ऐठन, दलित गरिबको जीवन जोखिम :: Nepal Post Dainik लहानमा पक्की घर निर्माणमा वडाध्यक्ष साहको ऐठन, दलित गरिबको जीवन जोखिम | Nepal Post Dainik
लहानमा पक्की घर निर्माणमा वडाध्यक्ष साहको ऐठन, दलित गरिबको जीवन जोखिम
अनुभक्त चौधरी लहान, २९ कातिक । दलित यतिकै दविएको छ । यसमा पनि मुसहर समुदाय । पक्की घरको सपना देखाएर कमसल सामाग्री प्रयोग । बर्षायाममा आराम पाउँन सपना देखेका मुसहरहरुलाई सरकारले दिएको पक्की घर यत्तिबेला नामको लागि मात्रै भएको छ । यस्तो घर बनाइदिएको छ जो एउटा हावाहुरीमै कर्कट पाता उडाएर लैजान्छ । दलितहरुको पक्की घरको सपना के पुरा होला त । जहाँ दलितहरुको उपभोक्ता समिति छ । तर, आफ्नो तरिकाले घर निर्माणको ठोस समान किन पाउँदैन । वडाध्यक्षले ठेक्केदार राखेर उपभोक्ता समितिको खाली (ब्लान्क) चेकमा सहिछाप गराएर सामाग्री खरिद गरी प्रयोग गर्दै आएको छ ।
तराई मधेश समृद्घि कार्यक्रम अन्तरगत सिरहाको लहान नगरपालिका वाडा नं. ११ मा सामुहिक भवन निर्माण भैरहेको छ । तर भवन हेर्दा मजबुत र भरपर्दो नरहेको स्थानियको गुनासो रहेको छ । बनिरहेको भवनको पिलरमा ३ सुतको एउटा रड मात्रै राखिएको छ भने जस्ता अनि एङ्गल पनि कमजोर देखिएको छ । भुई ढलान पनि तल धसिरहेको छ ।
सो निर्माण गरिएको घरमा बस्ने तयारी गरी सन्जी देवि सदायले घर त बनायो तर दुई नम्बरको ईटा प्रयोग गरिएको छ ।
त्यस्तै दिपक सदायका अनुसार मसला बनाउदा सिमेन्टको भाग भन्दा पनि बढी बालुवा हालेको छ छुदा पनि प्लास्टर झर्ने गरेको बताउँछन् । सदाले थपे मैले भन्दाभन्दै पनि मानेन मेरो बुवाले भन्दा बुवा संग नै झगडा भएको थियो । हामी गरिब छौं घर थिएन घर भयो राम्रो हो तर मजबुत भएन ।
निर्माणरत सामुदायिक भवन समितिका कोषाध्यक्ष पवनि देवी सदायका अनुसार ठेकेदार मार्फत काम भईरहेको छ । काम राम्रो संग भएको छैन । पलास्टरमा ढुङ्गा छ ढुङ्गा माथिबाट खस्दा भुईमा खाल्डो नै हुन्छ ।
।सामुदायिक भवन निर्माणको बारेमा लहान नगरपालिका वाडा नं. ११ का वाडा अध्यक्ष राज कुमार साहले “जो सधैं झुपडिमा बसिरहेको थियो उसलाई पक्की घरको बारेमा के थाहा हुन्छ । अहिले बन्दै गरेको अवस्थामा छ जुन बिग्रेको छ त्यो बनाउछौं । काम गर्दै त्रुटी हुन्छ त्यसलाई सच्याउँछौं । ”
टवाईलेट,वाथरुम सहित १२ ओटा कोठा निर्माण भईरहेको सामुदायिक भवनमा आठ कोठा निर्माण गरि रंग पनि भइसकेको छ भने चार कोठाको निर्माण काम अन्तिम चरणमा छ । उनीहरु भन्छन् — उपभोक्ता समितिमा काम भइरहेको छ । तर, ठेक्काको आधारमा वडाध्यक्ष राजकुमार साहले समितिका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षबाट खाली चेकमा सहिछाप गराउँँछन् । उनीहरुले नै बैकबाट पैसा झिक्छन् । अनि कमसल मालसमान प्रयोग गरेकोले सामुदायिक भवनको अवस्था कमजोर रहेको दावी गर्छन् ।